China China Herbs fanafody ho an'ny aretin'ny valan'aretina poultry Solution Oral Solution orinasa mpamatsy | Weierli
Sina Herbs fanafody ho an'ny aretin'ny otrikaretina poultry vahaolana amin'ny vavony
Fulilai dia raom-panafody fanafody raokandro sinoa ampiasaina hitsaboana aretin'ny taovam-pisefoana viralin'ny Poultry.
Fangaro: radix astragali, radix isatidis, mint, coix seed, honeysuckle sns zava-maniry ahitra
Fonosana: 1000g / kitapo
Fitandremana: Fitsaboana raokandro ho an'ny fampiasana veterana ihany
Fulilai- Herisetra voajanahary voajanahary-Nemesis aretin'ny taovam-pisefoana, mpiambina fiarovana vaovao.
♦ Manakana amin'ny fomba mivaingana ny famerenana virosy amin'ny vivo, ary hampiroborobo ny fihenan'ny endotoxine amin'ny vatana, amin'ny alàlan'ny fanakanana ny synthesis sy ny replication ny virus, ny fijanonana ny fizotry ny adsorption virus, ny fiovaovana, ny fusion cell, ny effets antiviral.
♦ Ampandehano ny hery fiarovan'ny vatana, ampio ny tsimatimanota, sorohana amin'ny fomba mahomby ny fanafihana karazana otrikaretina isan-karazany, manatsara ny valin'ny hery fiarovana, mba hitazomana ny fandanjana ara-batana ny vatana.
♦ Ho an'ny gripa avian, aretim-po any Newcastle, bronchite mifindra, laryngotracheitis mifindra ateraky ny aretin'ny taovam-pisefoana ambony. Ny akoho amam-borona dia miseho mievoka, mikohaka, vozony dia azo jerena amin'ny embolisme amin'ny fromazy, ny havokavoka dia misy fatrany fromazy. Ny airbag dia misy exudation toy ny fromazy, fivontosan'ny atiny sy ny voa ary lesiona hafa.
♦ Vokatra 1000g akoho amam-borona 1000-2500L, misy vokany tsara kokoa amin'ny rano mafana. Ataovy avo roa heny ny fatra ho an'ny olana lehibe, ampiasao 3-5 andro mandritra ny fitsaboana.
Teo aloha: Mpamatsy China China Fenbendazole Pyrantel Pamoate Praziquantel Takelaka / Bolus Deworm Fitsaboana biby ho an'ny saka alika vorona akoho amam-borona biby
Manaraka: Kalitao avo lenta ho an'ny herinaratra / zavamaniry / fitsaboana botanika manohitra ny fiakaran'ny mararin'ny hafanana sy ny hafanana (FECON-HERBS ORAL SOLUTION)
Fanafody miaina akoho amam-borona, fanafody aretin'ny taovam-pisefoana, aretin'ny taovam-pisefoana, aretin-koditra akoho, fanafody ho an'ny akoho, ahitra ho an'ny akoho, fanafody ahitra ho an'ny akoho, ahitra ho an'ny akoho, ahitra ho an'ny
Fahatongavan'i Shina China Fitsaboana veterinera Fen ...
Eoropeana fomba ho an'ny China Anti-Parasite Dewormer I ...
Safidy lehibe ho an'i Shina Ce Alika Pet Alika ...
Sina ambongadiny China fanafody farmasia China ...